ကျော်ကာလွှားကာ သုံးစရာ | kothihaoo
ဂျပန် နျူကလီးယား လုပ်သား ၂ ဦး ဆေးရုံတင်	Internet ကို 20% ပိုမြန်အောင်လုပ်နည်း
kothihaoo	Uncategorized	အင်တာနတ် မှာ ကျော်စရာ	Leaveacomment
ကျော်မရသူများ ultrasurf ဖြင့်ကျော်ပါ
ကျော်နည်းကတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ .
(၁) ultrasurf ကို Download လုပ်ပါ
(၂) စက်မှာ install လုပ်ပါ
(၃) option >> proxy settings မှာ Directly use ultrasurf ကိုပဲ အမှန်ခြစ်ထားပါ။
(၄) ok ပေးလိုက်ပါ ။
(၅) ပြီးတာနဲ့ ultrasurf ပုံလေးရဲ့အောက်က port နှင့် status ဆိုတာမှာ status မှာ connection ကို server နဲ့ ချိတ်မိတဲ့အထိစောင့်ပါ ချိတ်မိပြီဆိုတာနဲ့ status အကွက်မှာ successfully connected to server! လို့စာတန်းပေါ်လာပြီး IE browser ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် . ပေါ်လာတဲ့ IE browser မှာ ကိုနှစ်သက်တဲ့ ဆိုက်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး ကျော်လို့ရသွားပါပြီ .။
Internet Web Site ပိတ်ထားခြင်းအားဖြတ်ကျော်ခြင်း
Proxy နဲ့ပတ်သတ်ရင်တော့ ကျွန်တော်က သိပ်တော့ မသိဘူးဗျ
အခု သုံးနေတဲ့ Saudi Proxy တွေက သိပ်ကြာကြာမခံဘူးဗျ… တော်ကြာနေ တစ်ခါပြောင်း တော်ကြာနေတစ်ခါပြောင်း … တစ်ခါတစ်လေ စိတ်တောင်ညစ်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Freedom ကိုပိုသုံးဖြစ်တယ်။ Freedom က တော်တော်လေး ငြိမ်တယ်။ သူဟာသူ အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲ။ ဒါပေမယ့် Freedom က နည်းနည်းတော့ ရှုပ်တယ်ဗျ။ သိချင်တဲ့သူအတွက် အသေးစိတ်ပြောပြပေးမယ်လေ။
အရင်ဆုံး Freedom ကို download ဆွဲလိုက်ပါ။ Www.your-freedom.net မှာ Sing Up လုပ်ပါ။ Download ဆွဲပါ။
Setup ကိုအဆင့်ဆင့်လုပ်သွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Freedom ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ အဲ့နောက်မှာ သူက Language ရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာစာက အစပါပါတယ်။ မြန်မာပဲရွေးလိုက်ပါတော့မယ်။ Configuration Wizard ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Cancel နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ရန် ဆိုတဲ့ Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ဖရီးဒမ်ဆာဗာ အောက်က Address မှာ ems.resoluation.de ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Port မှာ 443 ကိုထည့်ပါ။ နောက် Options ထဲက မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ အရာသုံးခုလုံးကို Mark လုပ်ပေးပါ။ နောက် Account Information မှာ ခုနက Sing Up လုပ်ထားတဲ့ နာမည်နဲ့ စကားဝှက်ကို ထည့်ပေးပါ။
Proxy Setting ထဲမှာတော့ ကိုယ့်စက်ရဲ့ Proxy ကိုထည့်ပေးပါ။ ( ကျွန်တော်ဆိုရင် Proxy Address မှာ 192.168.2.4 : Proxy Port မှာ 8080 ကိုထည့်ပါတယ်။ )
ပြီးရင် သိမ်းပြီးထွက်ရန် ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Ports ဆိုတာမှာ SOCKS 4/5 Port 1080 နဲ့ Web Proxy Port 8080 ကို Mark လုပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် စတင်ဆက်သွယ်ရန်ကို လုပ်ပေးပါ။ ခဏလေးပဲကြာပါတယ်။ Freedom ကို သုံးလို့ရပါပြီ။
ပြီးရင် Firefox proxy မှာ 127.0.0.1 .. Port မှာ 8080 ထည့်လိုက်ပါ။
ကဲ … ကြိုက်တဲ့ website ကိုဝင်ကြည့်ပါ။ Access Denied တို့လည်းကင်းဝေးပါပြီ။ ( ultrasurf မှာတောင် ultrasurf က ဘန်းထားတဲ့ site တွေရှိပါသေးတယ်။ Freedom မှာတော့ မရှိပါဘူး ) … နောက်ပြီး Freedom က connection အဆိုးကြီးမဟုတ်ရင် အတော်လေးသုံးလို့ကောင်းပါတယ်…
From / / http://www.edinooyin.com